QacQoc GN30H, wuxuu adabtarad u yahay wax kasta oo aad u baahan tahay | Waxaan ka socdaa mac
QacQoc GN30H, wuxuu adabtarad u yahay wax kasta oo aad u baahan tahay
Luis Padilla | | dhowr
Lama dafiri karo in go’aanka Apple uu dekedaha caadiga ah uga saaray MacBook iyo MacBook Pros uu muran dhaliyay. Go'aanka ah in kaliya loo isticmaalo USB-C sida dekedda kombiyuutaradaada, iyo midka ugu halista badan oo kaliya ku habboon hal USB-C MacBook-kaaga waxay ku yeelan kartaa cilado kuwa isticmaala qaarkood waxayna ka dhigeysaa ku dhowaad qasab in la iibsado adabtar si loo daboolo dhammaan isku xirnaanta suurtagalka ah ee aan waligeen u baahan doonno.
Waxaa jira xeedho badan oo suuqa yaal, laakiin maadaama aan dooneyno inaan xoogaa iibsanno, marwalba way kafiican tahay inaan dhammaystirnaano sida ugu macquulsan oo aan noqonno qalabka kaliya ee aan ugu baahan nahay MacBook-keena ama MacBook Pro. USB badan, hal HDMI, USB-C oo lacag ku shubida laptop-ka, aqriyaha kaarka iyo xitaa xiriirka Ethernet haddii ay lagama maarmaan ahayd ... intaas oo dhan waa waxa QacQoc GN30H na siinayo ee aan tijaabinnay waxaanan kuu sheegi doonnaa dareenkeenna.
Naqshadeedu waa mid aad u adag oo iftiin leh, oo leh aluminium jir ah (oo lagu heli karo midabbo isku mid ah sida MacBooks) iyo qaar ka mid ah walxaha cad ee caagga ah. Dhinac ka mid ah waxaan ka helaynaa saddexda USB 3.0 iyo isku xiraha HDMI ee taageera illaa 4K xallinta si aad ugu daawato filimada ama miiska Mac-ga TV-ga qolka fadhiga si faahfaahsan.
Dhinaca ka soo horjeedka boosaska loogu talagalay kaararka SD iyo microSD, iyo dhinaca hore ee isku xiraha Gigabit Ethernet haddii qof uu sii wado isticmaalka fiilada si uu ugu xirmo internetka, iyo isku xira USB-C oo noo ogolaanaya inaan lacag ka qaadno MacBook-keena inta aan isticmaalno inta kale ee dekedaha. USB-C looma isticmaalo isku xirka darawalada banaanka, waxaa kaliya loogu talagalay wareejinta awooda.
Waad ku mahadsantahay isku xirka adoo adeegsanaya fiilo ku xiran USB-C-ka Mac-dayada wax dhibaato ah nagama soo gaari doono kala-goynta aaladaha ku xiran. Ka dib markaad isticmaasho laba qalab oo isku mid ah oo ku dhegan dhinaca laptop-ka iyo dhibaatooyinkaas Markii aan dhaqaajinaayay kumbuyuutarka, waxaan go aansaday markan mid xarig ah sida tan qacQoc GN30H.
Waqtigan xaadirka ah wax waliba waxay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay mana aanan wax dhibaato ah kala kulmin mid ka mid ah qalabka aan ku xirmay. By habka, ha moogaanin boorsada yar ee gaadiidka ay ku soo qaadaneyso sanduuqa gudihiisa maxaa yeelay aad ayey faa'iido u leedahay, iyo wax layaab leh in la helo maxaa yeelay qeexida alaabtu uma muuqan.
In kasta oo aan ugu baahanahay daqiiqado gaar ah, oo aan la qabsado macBookga cusub iyo MacBook Pro waa qasab illaa USB-C uu noqdo mid jaango'an. Markan, QacQoc GN30H waa midka ugu dhameystiran ee aan ka heli karno suuqa qiimo macquul ah iyadoo la tixgelinayo tirada iskuxirayaasha ay ku jiraan, iyo kuwa qiimahoodu aad u sarreeyaa si gooni gooni ah. Wax walba waxay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay, waa mid aad ufudud oo dekedaha waxay ku yaalliin si aan midkoodna qalabku kaaga hor istaagi doonin inaad isku xidho mid kale, sidaa darteed waa iibsi aad loogu taliyay oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya mid ka mid ah la qabsadayaashaas. Waxaad ku heli kartaa gudaha Egolggo HUB USB C ...Amazon »/] € 82,99.
Hal adabtar oo ururiya dhammaan isku xirnaanta lagama maarmaanka ah
Kiis difaac ah
Kuu ogolaanayaa inaad ku shubto laptop-kaaga adoo isticmaalaya dekado kale
Kuleylka isticmaalka dheer
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » QacQoc GN30H, wuxuu adabtarad u yahay wax kasta oo aad u baahan tahay